BCC ကျပြီး အသင့်နေနိုင်သည့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်က Royal Maung Bamar ကွန်ဒို အရောင်းပြပွဲ
ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး အင်းယားကန်နဲ့ ပြည်လမ်းအနီးက BCC ကျပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော Royal Maung Bamar ကွန်ဒို အရောင်းပြပွဲကြီးကို လာမယ့်မေလ ( ၂၅ - ၂၆ )ရက်နေ့တွေမှာ မနက်(၉)နာရီကနေ (၅)နာရီအထိ Royal Maung Bamar ကွန်ဒို မှာ ကျင်းပပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့အတူ ထပ်မံကျင်းပတော့မယ့် "City Loft Summer Sales Event (2)"
သန်လျင် Star City အိမ်ရာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ City Loft အိမ်ရာ နွေရာသီအထူးအရောင်းပြပွဲကို လာမယ့် မေလ (၁၈-၁၉) ရက်နေ့၊ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ညနေ (၅)နာရီအထိ ကြယ်စင်အိမ်ရာ အရောင်းခန်းမ၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ ShweProperty.com မှကြီးမှူးကျင်းပပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Friday, 18 January 2019 17:49
အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ အထူးအရောင်းပြပွဲမှာ Inno City ပါဝင်မည်
ရန်ကုန်လေဆိပ်နဲ့ ရှစ်ကီလိုမီတာအကွာ ဥက္ကလာဂေါက်ကွင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ Inno City ဟာ လေးကြိမ်မြောက် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ အထူးအရောင်းပြပွဲမှာ ၄င်းတို့ရဲ့ အခန်းတွေကို ပါဝင် ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Friday, 18 January 2019 14:39
၂၀၁၉ အိမ်ရာနှင့်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ပြပွဲ ကျင်းပနေပြီနော်.....
The 4th housing & Building 2019 ပြပွဲကို တပ်မတော်ခန်းမမှာ ယနေ့ကနေစပြီးတော့ ၂၀ ရက်နေ့ထိ သုံးရက်တိုင်တိုင် မနက် ၉ နာရီမှာ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Friday, 11 January 2019 16:26
Thursday, 10 January 2019 16:47
တန်ဖိုးသင့်တိုက်ခန်း သီးသန့်အရောင်းပြပွဲ မကြာမီ လာမည်
လစဉ် မြန်မာငွေ ၂ သိန်းဝန်းကျင်ခန့် အရစ်ကျပေးသွင်းပြီး ဝယ်ယူနိုင်မယ့် တန်ဖိုးသင့်တိုက်ခန်း သီးသန့်အရောင်းပြပွဲကို ၂၀၁၉၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့ထိ၊ မနက် (၉) နာရီကနေ ညနေ (၅) နာရီအတွင်း ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပြီး နေရာကတော့ First Step Restaurant (မြောက်ဥက္ကလာ အဝိုင်းအနီး) မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Monday, 24 December 2018 11:57
ဒလတံတားစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဖွင့်လှစ်မည်
ဒလတံတားစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် Vibro Hammer ဖြင့် ပိုင်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
သက်သာသောအတိုးနှုန်းနဲ့ အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်မယ့် Diamond Inya Palace Condominium အထူးအရောင်းပြပွဲကြီး
လတ်ဆတ်တဲ့ အင်းယားကန်ရဲ့ လေကို ရှုရှိုက်ရင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ 360 ဒီဂရီ မြင်ကွင်းကို ကြည့်ရှုခံစားရင်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ နေထိုင်လိုပါသလား ???